Yaa lagu soo qabtay howl-galkii NISA maanta ka fulisay degmooyinka Muqdisho? - Caasimada Online
Home Warar Yaa lagu soo qabtay howl-galkii NISA maanta ka fulisay degmooyinka Muqdisho?
Yaa lagu soo qabtay howl-galkii NISA maanta ka fulisay degmooyinka Muqdisho?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidanka NISA, gaar ahaan kuwa Duufaan ayaa howl-galo ballaaran oo saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyen qaar kamid ah degmooyinka Howl-wadaag, Yaqshiid iyo deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaalada Muqdisho, ayaa waxay soo qabteen Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha Shabaabka ah ee ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada Duufaan ayaa waxay tiradooda dhameyd saddex ruux, waxayna ku sugnaayeen deegaanka Ceelasha Biyaha.